छाउपडी नबारेर के गर्नू ? देउता रिसाउँछन् - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > छाउपडी नबारेर के गर्नू ? देउता रिसाउँछन्
छाउपडी नबारेर के गर्नू ? देउता रिसाउँछन्
२७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । चार वर्षअघि छाउपडी प्रथा मुक्त भएको आठबीस नगरपालिकाका महिलाहरूले अहिले पनि छाउपडी बार्ने गरेका छन् । ती महिलालाई लाग्छ ‘महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्नैपर्छ नत्र देवीदेउता रिसाउँछन्, ज्यानमा बिसञ्चो हुन्छ ।’ अन्धविश्वास र जनचेतनाका कमीकै कारण गएको पुसको पहिलो साता कठ्यांग्रिने जाडोमा पनि प्लास्टिक ओढेर ढोको र परालको सहारामा घरबाहिरै रात कटाउन बाध्य थिइन् एक किशोरी ।
स्थानीयदेखि जिल्ला तहसम्मका जनप्रतिनिधिसमेतले छाउपडी प्रथा मुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि दैलेखका अधिकांश गाउँमा कायमै छ ।
महिनावारी भएको बेला अहिले पनि आफूले घरबाहिरै रात काट्ने गरेको सोही नगरपालिकाकी हस्तना बोहराले जानकारी दिइन् । ‘दुःख त हुन्छ नै देउता मान्दैन । नबारेर के गर्ने ?’ बोहोराले भनिन् ।
महिलाहरूले मनैदेखि छाउपडी नछोडेसम्म राजनीतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले गरेर मात्रै नहुने उनले बताइन् । गाउँमा अझै छाउपडी किन कायम रह्यो कारण खोज्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
आठबिस नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा मुक्त घोषणा गरे पनि महिलालाई बुझाउन नसकेकै कारण अभियान सफल नभएको नगरप्रमुख खडगराज उपाध्यायले स्वीकार गरे । ‘हामीले यसलाई अभियानका रूपमा लिएर छाउपडी प्रथा हटाउने निर्णय गरे पनि गाउँका अधिकांश महिला नछुने भएको बेला घरभन्दा टाढै बस्न चाहन्छन्,’ उनले भने । अन्धविश्वासले गर्दा महिलाले छाउपडी प्रथा छोडन् नमानेको उनको भनाइ छ ।
फेरी प्रधानमन्त्री बन्न जालझेल नगर्नु : एमाले बरिष्ठ नेता नेपाल २७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १ शय ६ जना संक्रमित थपिए, थप २३ जनाको मृत्यु, निको हुनेको संख्या १ हजार ९ शय १६ २७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५
अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५
बङ्गलादेशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिने क्रम बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाइ २७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५
दोलखा जिल्ला मै पहिलो पटक दोलखा स्वास्थ्य चौकि दोलखालाई पोषण मैत्रि स्वास्थ्य संस्था घोषणा २७ असार २०७८, आईतवार ०७:५५